कालापानी, लिपुलेकबारे भारत र नेपालको यस्तो सम्झौता भएको रहेछ/सिमाबिदले खोले सबै रहस्य/तुरुन्त हेरौ …. – Tufan Media News
कालापानी, लिपुलेकबारे भारत र नेपालको यस्तो सम्झौता भएको रहेछ/सिमाबिदले खोले सबै रहस्य/तुरुन्त हेरौ ….
२४ कार्तिक २०७६, आईतवार २२:३४
काठमाडौँ । भारतले हडेको कालापानी र लिपुलेक नेपालले आफ्नो भएको अडान राख्दै आए पनि लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन रहेको विषयलाई नागरिक दैनिकले उठान गरेको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार दस्तावेजहरुले लिम्पयाधुरा पनि नेपालकै भूमि रहेको पुष्टि हुन्छ ।
समाचारमा थप लेखिएको छ, ‘नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उता परेको भारतले देखाएको छ । विवाद यहीँबाट उठान भएको हो । भारतले हडपेको कालापानी र लिपुलेक नेपालले आफ्नो भएको अडान लिँदै आए पनि लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन छ, त्यो क्षेत्रसमेत नेपालको भएको दस्तावेजहरुमा पाइन्छ । भारतले कुटियांगदी भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ ।’ हेरौ के भन्छन सिमाबिद –